Ny fanomezana maitso nataon'i MacKenzie Scott dia miitatra, mandefa olona an-tapitrisany ho any amin'ny laharana voalohan'ny fiovan'ny toetr'andro - Blue Ventures
Vondrona maherin'ny roapolo miasa amin'ny vahaolana amin'ny toetr'andro sy ny hamehana ara-tontolo iainana no isan'ireo 465 nahazo famatsiam-bola nomen'ny mpanao asa soa MacKenzie Scott - mpanoratra sady vadin'ny mpanorina ny Amazon Jeff Bezos teo aloha. Inside Philanthropy dia mitatitra fa ny ankamaroan'ny mpandray dia 'mpamerina', midika hoe fikambanana manohana ny eny ifotony, ny toetrandro eo anoloana ary ny hetsika momba ny tontolo iainana. Ny fifantohana amin'ny famatsiam-bola dia ireo fikambanana mampiasa fomba fandraisana anjara amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fanomezana fanomezana. Nanambara ny Blue Ventures tamin'ny herinandro lasa fa hahazo famatsiam-bola avy amin'i MacKenzie Scott ny asantsika noho ireo antony ireo indrindra – mifanaraka amin'ireo laharam-pahamehana efatra momba ny toetr'andro sy ny tontolo iainana ny asan'ny BV: ny zon'ny vazimba teratany sy ny fananan-tany, ny hetsika mifototra amin'ny vehivavy, ny vola avy any an-toerana izay manohana ny firenena. na faritra misy azy ireo, ary vola miorina any Etazonia na any an-toeran-kafa ao amin'ny Global North izay manohana ireo vondrona ifotony any ivelany.
Ireo mpanjono madinika izay miara-miasa amin'ny Blue Ventures dia vavolombelon'ny fiakaran'ny ranomasimbe, ny fihenan'ny tahirin-trondro, ary ny fiakaran'ny toetr'andro mahery vaika toy ny oram-baratra tropikaly, ny rivo-doza, ny tondra-drano ary ny hain-tany. Vakio ny lahatsoratra feno raha te hahalala bebe kokoa momba ny fanomezana sy ny fiantraikan'izany amin'ny asan'ny Blue Ventures:
Ny fanomezana Maitso an'i MacKenzie Scott dia mivelatra, mandefa olona an-tapitrisany ho eo amin'ny laharana voalohany amin'ny fiovan'ny toetr'andro – Inside Philanthropy, 29 martsa 2022.
Fiovan'ny toe-trandro, fiarovana ny fiaraha-monina, Conservation, jono, fitantanana ny jono